साबधान ! शनिबारको दिन यि काम कहिल्यै नगर्नुहोस् ! « Nepal's number 1 Entertainment news portal
साबधान ! शनिबारको दिन यि काम कहिल्यै नगर्नुहोस् !
Published : 25 July, 2020 10:29 pm
शनिवारको दिन शनिदेवको विशेष दिन हो । शनिदेवलाई न्यायका देवता मानिन्छ । शनिबार शनिदेबको दिन भएकाले आज शनिदेवका विरोधी काम गर्न रामे मानिदैन् । आज शनिदेबलाई प्रसन्न गर्ने काम गनूपर्छ । जस्त ैशनिलाई प्रसन्न गर्नका लागि यस दिन सर्सिउको तेल, कालो तिल आदी चढाइन्छ ।ज्योतिषीय मान्यता अनुसार जसकोे कुण्डलीमा शनिदोष हुन्छ उनीहरुले शनिदेवको पूजा गर्न जरुरी छ ।